Ihe ị ga-ahụ na Soria na gburugburu ya, site na katidral na hermitage nke San Saturio | Akụkọ njem
Ihe ị ga-ahụ na Soria na gburugburu
Louis Martinez | 28/12/2021 13:36 | Spain obodo, Nduzi
Ọ bụrụ na ị na-eche ihe ị ga-ahụ na Soria na gburugburu N'ihi na ị na-eme atụmatụ nleta na obodo Castilian, ị kwesịrị ịma na o nwere ihe nketa pụrụ iche. N'ezie, ọ bụ ihe ijuanya na obodo nta dị otú ahụ (nke dị ihe dị ka puku mmadụ iri anọ) nwere ihe nketa dị otú ahụ.
Maka nke a, ọ sitere na oge Rome ruo ugbu a, site na Middle Ages, Renaissance, Baroque ma ọ bụ Neoclassicism. Ya mere, ọ dabara nnukwu iche iche na nnukwu akụ. Tụkwasị na nke ahụ, Soria nwere ebe dị iche iche nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Na, ọ bụrụ na ihe ndị a dị ntakịrị n'anya gị, ọ nwere ọmarịcha gburugburu ebe obibi na nke ụlọ akụkọ ihe mere eme dịkwa ụba. Mana, na-enweghị mmasị ọzọ, anyị ga-egosi gị ihe niile ị ga-ahụ na na gburugburu Soria.
1 Ihe ị ga-ahụ na Soria na gburugburu, site na ncheta obodo ruo na gburugburu ebe obibi
1.1 Plaza Mayor, ihe mbụ ịhụ na Soria
1.2 Co-Katidral nke San Pedro
1.3 Ụka ndị ọzọ ịhụ na Soria
1.4 Soria mgbidi na nnukwu ụlọ
1.5 Obí eze
1.6 gburugburu Soria
Ihe ị ga-ahụ na Soria na gburugburu, site na ncheta obodo ruo na gburugburu ebe obibi
Anyị ga-amalite ụzọ anyị site na Soria, onye ihe ncheta ya anaghị emebi ndị nke Segovia o Avila, n'etiti obodo Castilian. Mgbe ahụ, anyị ga-abịaru nso na odida obodo na ihe ncheta nke ala ịta ahịhịa nke, Otú ọ dị, dị oke egwu na ga-amasị gị. Ihe niile a na-echefughị ​​ihe ngosi nka na-adọrọ mmasị na ọ na-enye gị.
Plaza Mayor, ihe mbụ ịhụ na Soria
Main Square nke Soria
Iji mezuo atụmatụ anyị, anyị malitere njem nleta nke Soria na Plaza Mayor, ezigbo etiti akwara nke obodo ahụ. Porticoed yana ya Isi iyi nke Ọdụm N'etiti ya, nke e wuru na 1798, o nwere ọtụtụ ihe ncheta nke, n'onwe ha, kwadoro nleta na Soria.
Ọ bụ ikpe nke Obí nke ndị na-ege ntị, nnukwu ụlọ neoclassical mara mma nke sitere na narị afọ nke XNUMX nke nwere ebe ọdịnala taa. Sitekwa na Ụlọ Ezinụlọ iri na abụọ, onye facade bụ ụdị post-Hererian, na nke Oflọ ndị nkịtị, taa Municipal Archive. N'otu aka ahụ, ị ​​nwere ike ịhụ na Plaza Mayor nke Doña Urraca Palace, onye ụdị ya ugbu a sitere na narị afọ nke iri na asaa, na site na Ụlọ Nzukọ Alaeze ya na ụlọ agbakwunyere, malitere na njedebe nke narị afọ nke XNUMX.
Co-Katidral nke San Pedro
Ọ bụ ezie na ọ na-echekwa ihe fọdụrụ nke ndị mọnk ochie site na narị afọ nke XNUMX, e wuru ya na XNUMXth na-esote akwụkwọ ikike nke ndị mọnk. ụdị plateresque. O nwere atụmatụ ime ụlọ nke nwere ọdụ ụgbọ mmiri atọ kewara ụzọ ise ma nwee elu ụlọ nwere mkpuchi nke kpakpando. N'ime ya ụlọ ọtụtụ ụlọ ekpere na isi altarpiece, ọrụ nke Francisco del Rio na narị afọ nke iri na isii. Banyere mputa, na Ọnụ ụzọ nsọ na ụlọ elu ahụ, ya na mgbịrịgba ya dị egwu.
Ma nnukwu ọla nke Co-Katidral bụ ya cloister, e kwupụtara ihe ncheta mba na 1929. A na-esi n’ọnụ ụzọ abanye n’ọnụ ụzọ nke nwere oghere ọkara okirikiri ma wuo ya na narị afọ nke XNUMX. Atọ nke arched veranda nwere isi obodo na-anọchi anya ọmarịcha anụmanụ, ahịhịa na akụkụ nke Bible. Site cloister, ị nwekwara ike ịnweta Refectory, nke ugbu a ụlọ ndị Diocesan Museum.
Ụka ndị ọzọ ịhụ na Soria
Churchka nke San Juan de Rabanera
Obodo Castilian nwere otu parish iri atọ na ise, mana ọtụtụ n'ime ụka ya apụọla n'anya. Agbanyeghị, n'ime ndị echekwara, anyị ga-akwadorịrị ka ị gaa na atọ: nke San Juan de Rabanera, nke Our Lady of Espino na nke Santo Domingo.
Nke mbụ bụ nke Romanesque mbubreyo ma bụrụ ihe ncheta mba kemgbe 1929. N'akụkụ nke ya, ụlọ nke abụọ nwere ihe oyiyi nke onye na-elekọta obodo ahụ ma wuo ya na narị afọ nke XNUMX na-esote akwụkwọ Plateresque na foduru nke ụka ochie ọzọ. Dị ka nke dị na Santo DomingoỌ bụkwa Romanesque, mana mmalite ya kacha dị na facade ya. Ọ bụ Atọ n'Ime Otu gbara ya gburugburu anọ archivolts nwere ihe osise Akwụkwọ Nsọ pịrị apị na e nwere nanị ise nke ụdị a n'ụwa.
Dị ka anyị gwara gị, ọ bụghị naanị ha bụ ụka a na-ahụ na Soria na gburugburu ya. Anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na San Nicolás, San Ginés, Santa María la Mayor ma ọ bụ San Miguel de Cabrejas.
Soria mgbidi na nnukwu ụlọ
Mgbidi nke Soria
N'ịga n'ihu na ụlọ ọrụ obodo nke Soria, anyị ga-ebu ụzọ gwa gị gbasara ya ochie mgbidi. Ewubere ya na narị afọ nke 4100, ngụkọta ya dị mita XNUMX ogologo yana akụkụ anọ n'ụdị ya. Ugbu a, a na-echekwa akụkụ dị mma nke ya, ọ bụ ezie na ọ bụghị ọnụ ụzọ ya. Kama, a ka nwere ọnụ ụzọ abụọ ma ọ bụ obere ọnụ ụzọ: San Ginés na San Agustín.
N'akụkụ nke ya, nnukwu ụlọ ahụ, nke dị ugbu a mkpọmkpọ ebe, bụ akụkụ nke mgbidi ahụ ma kwenye na e wuru ya n'oge. Fernan Gonzalez. Taa, ị nwere ike ịhụ ihe fọdụrụ nke ebe a na-edebe ya, mgbidi dị n'ime ya na ịnweta ya, nke dị n'akụkụ abụọ cubes.
N'aka nke ọzọ, ndị akwa akwa obodo ochieỌ bụ eziokwu na e weghachiri ya ugboro ugboro. A na-ewu ya na nkume, ọ dị otu narị mita na iri na abụọ ma nwee oghere asatọ semicircular. Anyị na-adụ ọdụ ka ị gaa na ya n'abalị, n'ihi na ọ nwere ọmarịcha ọkụ abalị.
Anyị na-akwadokwa ịga na Charles IV bridge, malitere na narị afọ nke XNUMX na ígwè ahụ, nke e wuru na 1929 ka ụzọ ụgbọ oloko dị n'etiti Soria na Torralba.
Obí nke Ọnụ ọgụgụ nke Gómara
Otu akụkụ dị mma nke ihe nketa dị egwu ịhụ na Soria na gburugburu ya bụ nnukwu ụlọ ndị mara mma. N'ime ha, abụọ pụtakwara: nke ọnụ ọgụgụ Gómara na nke Los Ríos na Salcedo.
Ewubere nke mbụ n'ime ha na njedebe nke narị afọ nke 2000 na-enwe mmetụta dị ukwuu site na ụdị Herrerian ma bụrụ ihe bara uru nke mmasị Cultural kemgbe XNUMX. N'ụzọ dị ịtụnanya, na Obí nke Rivers na Salcedo Ọ bụ otu ezinụlọ mere nke gara aga wuru ya. Ọ dị na ụdị Renaissance ma ugbu a nwere ebe nchekwa akụkọ ihe mere eme nke Provincial.
Tinyere ụlọ ndị a mara mma, ị nwere ike ịhụ ọtụtụ ndị ọzọ na Soria. Anyị ga-eme ka ị pụta ìhè Obí nke Castejones na Don Diego de Solier, nke dị n'otu, yana nke Provincial Council, nke bụ neoclassical ma na-enye gị ihe oyiyi na-adọrọ mmasị n'ihu ya.
N'aka nke ya, ụlọ nke Enyi na enyi Numancia Ọ bụ ihe onwunwe mara mma nke narị afọ nke XNUMX. N'ime, Ụlọ Nzukọ nke enyo na Ụlọ ihe nkiri Poets, raara nye ndị gafere Soria na amaokwu raara onwe ya nye ya: Gustavo Adolfo Bécquer, Antonio Machado na Gerardo Diego.
Nkume nke San Satio
Ọ bụ ezie na anyị ahapụla ụfọdụ ihe ncheta na pipeline, anyị ga-agwa gị ugbu a banyere ọmarịcha gburugburu obodo Castilian na ihe nketa ha nwekwara. Na nnukwu ụlọ, nke dị n'ebe a, ị nwere echiche kachasị mma ịhụ Soria site na ebe kachasị elu. Otú ọ dị, isi ngụgụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nke obodo ahụ bụ Alameda de Cervantes Park, ebe e nwere ihe karịrị otu narị na iri atọ ụdị osisi.
Ị nwekwara ike ịgafe na ya San Polo Walk na, n'oge okpomọkụ, na-asa ahụ na Sotoplaya del Duero. Naanị iwere ụzọ a ị ga-eru hermitage nke San Satio, otu n'ime ụlọ nsọ kacha chọsie ike na obodo Castilian ma raara nye onye na-elekọta ya. Ewubere ya na narị afọ nke XNUMX n'ọtụtụ ọgba na ụlọ ndị a gbapuru na nkume. N'ime ya nwere mgbidi Baroque na ebe ịchụàjà bụkwa nke ụdị a.
N'aka nke ọzọ, ihe dị ka kilomita asatọ site n'obodo ahụ bụ ugwu Valosandero, nke bụ otu n'ime ebe ndị Sorian na-amasịkarị ịga njem na-ekpori ndụ. Ka ị na-aga n'akụkụ ụfọdụ n'ime ụzọ ya, ị ga-enwe ike ịhụ ihe osise ọgbara ọhụrụ sitere na Bronze Age.
Mana, ọ bụrụ na enwere ebe ị ga-ahụrịrị na gburugburu Soria, nke a bụ mkpọmkpọ ebe nke Numancia, ndị Celtiberia oge ochie bụ́ ndị ji obi ike guzogidere nnọchibido nke ndị agha Rom ruo mgbe ha mesịrị gbuo onwe ha ọnụ. Kpọmkwem, ọ dị na Cerro de la Muela ma nwee ntụrụndụ nke ụlọ na ụlọ ndị ọzọ nke oge ahụ.
Ihe nkwado dị mkpa na nleta a bụ Antlọ ihe nkiri Numantino. Ọ nwere ọtụtụ n'ime iberibe achọtara na saịtị nke obodo oge ochie, kamakwa ndị ọzọ ọbụna ndị okenye, nke Paleolithic na Iron Age.
Hermitage nke San Bartolomé, na ọwa mmiri nke osimiri Lobos
N'aka nke ọzọ, na-amanye mkpọmkpọ ebe nke Ebe obibi ndị mọnk nke San Juan de Duero. Ewubere na narị afọ nke XNUMX, anyị ga-erute ya na-agafe àkwà mmiri Rome. Ka ọ dị ugbu a, a na-echekwa nnukwu ụlọ elu nke ime ụlọ ya, bụ́ ndị e ji ihe enyemaka chọọ ya mma.
N'ikpeazụ, anyị na-adụ gị ọdụ ileta Osimiri Lobos, ọbụna na-adọrọ mmasị karịa ebe gara aga ma dị na ogige ntụrụndụ nke otu aha ahụ. N'ime ya, nke ugwu ndị dị n'ebe ugwu, dị Ụlọ ihe nkiri nke San Bartolomé, na-eme saịtị jupụtara n'ihe omimi. Ndị Templars wuru na nkeji mbụ nke narị afọ nke XNUMX, ọ na-ejikọta Romanesque na Gothic ma bụrụ akụkụ nke ebe obibi ndị mọnk nke kwụsịrị ugbu a.
N'ime ogige ntụrụndụ eke a, enwere ọtụtụ echiche ị nwere ike iru site n'ụzọ njem iji nweta ọmarịcha echiche nke ọdọ mmiri ahụ. N'ime ha, nke Costalago, nke Lastrilla na nke La Galiana. Ị nwekwara ike ime njem nlegharị anya igwe kwụ otu ebe na ọbụna ịnya ịnyịnya.
N'ikpeazụ, anyị egosila gị ọtụtụ ihe ihe ị ga-ahụ na Soria na gburugburu. Anyị enweghị ohere ikwupụta ihe ebube niile nke obodo Castilian na ndị gbara ya gburugburu. Mana anyị anaghị ajụ ịkpọ gị ọnụ ọgụgụ ndị dị ka Burgo de Osma, na Katidral dị egwu nke Santa María de la Asunción na Ụlọ Ọgwụ de San Agustín; Medinaceli, ya na Plaza Mayor ya dị egwu, ma ọ bụ Vinuesa, nke nwere nnukwu ihe nketa okpukperechi, nke dị nso na Laguna Negra na glacial cirques nke Sierra de Urbión. Ọ bụghị ezigbo echiche ileta ihe ịtụnanya ndị a niile?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Ihe ị ga-ahụ na Soria na gburugburu
Ihe ị ga-ahụ na Madrid n'otu ụbọchị